ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:27 AM
ဟုတ်တယ်ဗျ ကျနော်ဆို ပထမဆုံးလာရောက်အားပေးစကားရေးသားသူအဖြစ်
စိတ်ထဲမှာအမြဲရှိနေတာ..မှန်တယ်..မှန်တယ် အမောင်သဘေတူတယ်..လက်ညိုးထောင်တယ် ခေါင်းညိတ်တ.်..အပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်ဗျာ.....
မှတ်မိခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင် ထိုသူ၏ ခင်မင်မှု၊ တွယ်တာမှု၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ လေးစားမှု၊ သတိရှိမှု၊ သိတတ်မှု၊ အလေးအနက်ထားမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု တို့များစွာ ပါသည်ဟု ကျမ လေးနက်စွာ ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုအရေးပါသောအရာများ မပါခဲ့၍သာ မှတ်မိခြင်းစွမ်းရည် လျော့နည်းပြီး မေ့လျော့ခြင်းဖြစ်
A professor remembers students' name and brief biography particular to those of notorious and car owners.
ကိုယ်ခင်မင်ရတဲ့သူတွေကို နာမည်လေးတွေ အသေးစိတ်က အစ မှတ်မိတာ ဝမ်းသာစရာနော်.. ကိုယ့်ကိုယ်မှတ်မိရင်လည်း ဝမ်းသာရတာပေါ့သဒ္ဓါ..
သို့သော်လည်း.. အသက်ကြီးလာရင်လည်း မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအား လျော့နည်းလာတာကြောင့် မေ့လျော့တာတွေ ပါးစပ်ဖျားတင် မေ့နေတာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။။
အဲသလိုပေါ့.. တို့လည်း အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ ဥာဏ်မကောင်းတော့ဘူးအေ. မေ့တတ်လာပြီ။ အဲလိုဖြစ်လာရင် နည်းနည်းတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ။။
ကျွန်တော်ကတော့ မေ့တတ်တယ် လူကိုသတိရပြီးနာမည်မေ့နေတာမျိုး
ဟုတ်တယ် မမ.. ဒီပိုစ့်လေးအရမ်းကြိုက်တယ်...
ကန်ဒီလည်း အဲ့လိုလူဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားတယ်..
ဒါက သူတပါးကို အလေးထားရာရောက်တယ်.. ဈေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာထက် ပိုတန်ဖိုါ်ရှိတယ်..
ကိုယ်မှတ်မိတဲ့သူက ကိုယ့်ကိုမှတ်မိရင်ပျော်သလို ၊ ကိုယ့်ကို မမှတ်မိရင်လည်း ပြန်မိတ်ဆက်လိုက်တာပါပဲ။ သိပ်တော့လည်း စိတ်ထဲ မထားခဲ့ပေမယ့် အခုမှ သေချာဆန်းစစ်မိတယ်။ ကိုယ့်ကို မှတ်မိရင်ပိုပျော်တယ်။
ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်တစ်ယောက်နဲ့ ကွဲသွားတာကြာပြီ။ ကိုယ့်ကို အခုမှ ပြန်မြင်တွေ့ပေမယ့် အဲဒီသူငယ်ချင်းက မှတ်မိတယ်။ အဲဒီတော့ သူ့ဆိုင်မှာပဲ အမြဲအားပေးဖြစ်တော့တယ်။း)
မှတ်မိခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အမှတ်ရစရာတွေအများကြီးပေါ့။
" မှတ်မိခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင် ထိုသူ၏
ခင်မင်မှု၊ တွယ်တာမှု၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ လေးစားမှု၊ သတိရှိမှု၊ သိတတ်မှု၊ အလေးအနက်ထားမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု တို့များစွာ ပါသည်ဟု ကျမ လေးနက်စွာ ယုံကြည်ပါသည် ... " ဆိုတာ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ် ညီမရယ်။ ဒါပေမယ့် ခြွင်းချက်အနေနဲ့ မမြသွေးလို လူမျုိုးကိုတော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော် ။
ဒီမနက်ဘဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ လမ်းမှာတွေ့၊ လက်တွေဆွဲနှုတ်ဆက်ကြ၊ ကိုယ်ကတော့ လုံးဝမမှတ်မိ၊ သူပြောတဲ့စကားအသွားအလာကောက်ပြီး ဘယ်သူလည်း အမြန်စဉ်းစားမှ ပြန်မှတ်မိလာရတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာတော့ မှတ်အားတွေ ကုန်ခမ်းသွားပြီ။ ကိုယ့်ဖုန်းနံပတ်တောင် တစ်ခါတစ်လေ မေ့ချင်ချင်။ :)
မမှတ်မိတာ ဟာ.....ဒါတွေ မပါခဲ့လို့ပဲ ။
မမကလဲ ဒိုးကန်ဆို တခုခုကိုပါးစပ်ဖျားတင်မေ့တာ
“သူတယောက်က မိမိ၏နာမည်ကို မှတ်မိစွာ ခေါ်ဆို လိုက်သောအခါ ဖေါ်မပြနိုင်သော ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ”
ကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာဆိုရင် လာသမျှဧည့်သည်တိုင်းကို မမှတ်မိပေမယ့် မှတ်မိသမျှဧည့်သည်တွေရဲ့နာမည်ကို ခေါ်ပြီး ခရီးဦးကြိုလိုက်ရင် သူတို့က သိပ်ဝမ်းသာကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ နာမည်ကိုမှတ်မိနေလို့လေ..။ အဲဒါ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လေ..း)
ဒါမဲ့ ကိုယ်တိုင်က မေ့တတ်သူဖြစ်နေတာဆိုးတယ်။
ကျွန်တော့် အရင်းဆုံးသယ်ရင်းတွေရဲ့ မွေးနေ့တောင် မမှတ်မိဘူး။ ဒါမဲ့ မခင်ဘူးလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အရမ်းခင်တာ။ မှတ်မိတတ်တာကျ မှတ်မိနေပြန်ရောလေ။
တနေ့ လမ်းမှာတွေ့လို့ မမှတ်မိရင် စိတ်ဆိုးနဲ့နော်..ဟိ
သဒ္ဓါရေ တီတင့်က ငယ်ငယ်ထဲက မှတ်ဥာဏ်က သိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ လမ်းမှာတွေ့လို့ မခေါ်မိရင် သဒ္ဓါကပဲ တီတင့်လက်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပါနော်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မှတ်ဥာဏ်ကွာခြားမှုလေးတွေတော့ မတူဘူးပေါ့နော် (သဒ္ဓါ့ကိုတော့ မမေ့ပါဘူး ကျေနပ်တယ်ဟုတ်?း))
အခုအသက်လေးရလာတော့ အရင်ထက်မေ့တတ်စ ပြုလာပြီ သဒ္ဓါရေ။
မမရေ...ပို့စ်လေးထဲက အတိုင်းပါပဲ..အတိုင်းမသိ ပျော်ရွင်ကြည်နူးစရာ အတိပါပဲ...မမ
ပထမ အတော်များများကိုတော့ စွဲစွဲထင်ထင်၊ မှတ်မှတ်ရရ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
တမင်ဖျောက်ထားရတဲ့ မှတ်မိခြင်းများကတော့ နာနာကျင်ကျင် ...
ရွေးကောက်ပွဲပွဲနေ့လေ.. မှတ်မိပါတယ်.. :D
မှတ်မှတ်ရရ..စီဗုံးမှာ လာနှုတ်ဆက်ပြီး အားပေးစကားပြောလေ့ရှိတဲ့ မဒါ ကိုတော့ ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး..း)
ကိုယ်က မှတ်ဥာဏ်နုံနဲတဲ့အပြင် မျက်လုံးပါမှုန်လေတော့ (လေးလုံးပါ) တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်တွေကို လမ်းမှာတည့်တည့်ကြီး မတွေ့မိလို့ စိတ်ဆိုးတာခံရတော့ ခဏခဏပါပဲ...းD
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို တခုတ်တရ မှတ်မိနေရင် ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်ပြီးတော့ကို ဝမ်းသာကြည်နူးမိသလို မှတ်မှတ်ရရ ရှိမနေရင်လဲ ရင်ထဲက အရမ်းဝမ်းနည်းရတယ်...
အစ်မ အတွေးလေး အရမ်းကောင်းတယ်...
၀မ်းအနည်းဆုံးကတော့ ငယ်ငယ်က ဆရာမတွေနာမည်ကို မမှတ်မိတာပဲ။
ဘာလို့မှန်းလဲ မသိဘူး။ တချို့ဆရာမတွေပဲမှတ်မိတယ်။ တော်တော်များများကို မေ့ကုန်တာ။ ဆရာမတွေကျေးဇူးကိုတော့ အမြဲသတိရပါတယ်။ ဒါက ဂျူမမှတ်မိတာပေါ့နော်။
ကိုယ့်ကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မမှတ်မိတာကတော့ သဒ္ဓါပြောတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ မလုံလောက်လို့ ထင်ပါရဲ့။
မှန်လိုက်တာ မသဒ္ဓါရေ... ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင် နေရာဒေသတစ်ခုကိုရောက်ရင် ခမနီယံ ၀တ ဘော၊ ယာပနီယံ ၀တ ဘောဆိုပြီး ရဟန်းတော်တွေကို မေးလေ့ရှိတယ်လေ။ လူတစ်ယောက်ကို ပြန်တွေ့တဲ့အခါ တွေ့တွေ့ခြင်း နာမည်ခေါ်နုတ်ဆက်ခြင်းသည် ပီယဆေးတစ်မျိုးပဲလို့ ကြားဖူးသလိုလို...
ဲကိုယ်လည်း လူတွေကို သိပ်မမှတ်မိတတ်ဘူး...
အထူးသဖြင့်နာမည်တွေကိုပေါ့ သူတို့ကို အလေးအနက်မထားတာ မဟုတ်ပေမယ့်... ဦးနှောက်ကပဲ သိပ်မကောင်းလို့လားမသိဘူး မမှတ်မိဘူးလူတွေကို...